Awoowyadeen ayaa 1820kii u diidey great brittany iney berbera port ka ibiyaan maanta 2015 ayeynu carab ka iibinaa waa ma dhacdo!!!! | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Awoowyadeen ayaa 1820kii u diidey great brittany iney berbera port ka ibiyaan maanta 2015 ayeynu carab ka iibinaa waa ma dhacdo!!!!
Waqtigii ugu horeeyey ee boqortooyadii Ingririisku la soo xidhiidhay dalka Somalilnd waxa ay ahayd 1820kii.
Nin la odhan jirey MAJAR F.M.HUNTER oo Ingriiska u fadhiyey maagalada Cadan ee Yementa ayaa berbera la soo xidhiidhey ,ninkaasi,fariinta uu soo direy waxay ahayd arin ay ummaddii Somaliland fajac iyo amakaag ku riddey,arintaasi uu rabo Mr.Hanter waxay ahayd in dekadda Berbera laga iibiyo oo lagu wareejiyo oo boqortooyada ingiriisku maamusho dekedda Berbera.
Markii danbena waxaaba yimid Mr.Hanter oo socda wuxuu la shirey reer Berbera wuxuu yidhi dekedda iga iibiya,Odayadii waxay ku yidhaahdeen SAAN-CADDAALOW adigaa sheegi.
-Adigaa Mr.Hanter sheegi qiimaha Berbera aad sii saneysee.
-Adoygii ama duqii Berbera waa maqan yahay ee hayimaado,
Waxaa Berbera ka talinayey BOOKH CALI waana loo cid direy.
Sida gabeyga Bookh ka muuqata arinta Mr.Hanter kaligii kuma uu ahayn ee Somali iyo Caraba waa la wadeen.
Dadkii Somalind oo yaaban Berbera Port ayaa saancadaale iibsanaya (Waqtigan ingriis inama qabsan waa ka hor 1820) ayaa
Duqii ama ninkii waqtigaa Berbera ka talinayey oo loo cid direy uu yimid Berbera,Markiiba Bookh ayaa amar bixiyey in deg deg loo hor keeno Saan-Caddaalaha Berbera iib ku doonaya, markii uu Mr.Hanter isa soo hortaagey ayuu Bookh Cali wayrax-tiriyey
gabey qiimo badan oo wisiisi waddaniyadeed ah.gabeygaasi wuu dheera ee iminkana intan hoose ayuunba laga hayaa:
HANTAROW DAD WADA WAALAN BAAD,WAX IS TIDHAAHDEENE
ADIGIYO KUWII KUU WARRAMAY,BAAN WAXBA OGEYN
WALAAYADA ISAAQ WAA BERBERA,WAADI LA CABBAAYE
WADNAHAYGA IYO BAY KU TAAL,WAAXDA FEEDHABA’E
WAX LA SIIYO IYO IIB BERBERA ,WAY KA WEYN TAHAYE,
HA WADWADIN WAX-YEELLAA KA IMAN,WEEDHAN AAD TIDHIYE.
Dad weynihii Somalind oo awalba dareenkoodu kacsana kana war sugayey,jawaabta duqa magaalada Bookh uu bixin doono,ayaa gabayga Bookhna uu sii abuurey dacar iyo gadood hor leh oo wadaniyadeed oo sameeyey gabi ahaanba dhulkii Somalind.Taasi waxay keentey iney dirqi iyo naf la caarid ah uga baxsadaan berbera Mr.Hanter iyo intii dabada ka wadey.
Maalintaa wixii ka danbeeyey Boqortooyada Ingiriiska iyo Somalind waxaa ka dhex qarxay dagaal tariikhda galey.
1825 waxaa berbera agteeda lagu gubey markab la odhan jirey MARY-ANNE,shaqaalihii markabkana waa la laayey.
Boqortooyadii Ingiriisku 10 sano ayey cuna qabateyn ku haysey Berbera,Bulaxaar,Saylac iyo dhamaan Somalind.
Tariikhdaasi waa tariikh qoran ee Maanta aan u soo noqdo BERBERA PORT,XUMUUMADA SIRAANYO iyo DUBIA PORT WOLRD.Ma waxay kula tahay ama xukuumada siraanyo la tahay iney ka iibin dakeda Berbera ee tariikhda loo soo marey ama CALI XOORXOOR iyo SACAD ayaa reer Berbera matali kara oo BOOKH CALI matali kara,?
Ma Xirsi iyo Baashe Morgan ayaa dilaali kara Berbera Port??
Ma dowladan waqtigeedu dhamaadey ee qandaraas saxeexi karta?
Ma boobkan wadanka ka socda ayaa Berberana lagu darey?
Ma dadkii baa la faley oo SOODHE laga dhigey?
Ma Somalind ayaa leygu dliaya iyo nabadaada ilaasho?
Awalba dowladan iyadaa berbera port cuneysey maanta iib ayey labtaa oo intii ay ka helysey ayaa ku filnaan waayey?
SOMALIND HA WAARTO OO HA JIRTO
Cabdi Cali Jamac